Burmese taste - Iora: ပုဇွန်ကြော်၊အရွက်သုတ် နဲ့ ချိစ်ကိတ်လာစားလှည့်နော်
Welcome to my blog - Mingalar bar
Sometimes, I feel like I would like to share something with my old friends, new friends and my family members. This is justaplace where I, my friends and my family members can share our ideas and our interests.
ပုဇွန်ကြော်၊အရွက်သုတ် နဲ့ ချိစ်ကိတ်လာစားလှည့်နော်
ပုဇွန်ကြော် နဲ့ စပ်ချဉ် (Fried prawn with spicy dip)
လုံးဝမအားတဲ့ကြားကဒီနေ့ ဖျစ်ညှစ်ပြီးပို့ စ်တင်လုိုက်ပါတယ်။ တကယ်တော့တင်ပေးမယ်ပြောထားတဲ့
ချိ်စ်ကိတ်လုပ်စားထားတာလေးတွေကိုအကြွေးတင်နေတာကြာလှပါပြီ။ တကယ်ဘဲစိတ်ထဲမှာအဲဒါလေးတွေအရင်တင်ချင်ပါတယ်။ မအားတာတွေဆက်နေလို့ မရေးကိုမရေးဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတာ။ ခုတော့ကြိုးစားပြီးရေးလုိုက်ပါတယ်။း)
တဆက်တည်းအဲဒီရက်တွေတုန်းကလုပ်စားခဲ့တဲ့ပုဇွန်ကြော်လေးနဲ့ ဆလတ်သုတ်လေးပါ တွဲတင်လိုက်ပါတယ်။ လုပ်စားထားတာတွေက သုံးလေးလလောက်တောင်ရှိနေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ချိစ်ကိတ်ပုံတွေနားမှာကပ်နေတာနဲ့ တခါတည်းတွဲတင်လုိုက်ပါတယ်။
သန့် စင်ပြီးပုဇွန်များ (Costco ကသန့် ပြီးသားဝယ်ထားတာပါ)
အိုင်အိုရာက ဒီလိုမျိုးအကြွတ်ကြော်စားရင်တော့ဖရုိုးဇန်းပုဇွန်တွေကိုသုံးတာများပါတယ်။ သူကအားလုံးသန့် စင်ပြီးသားဆိုတော့အချိန်မကုန်ဘူး။ ထမင်းကြော်တို့ ၊ ဖတ်ထုိုင်းကြော်တုို့ အဲလိုဘာကြော်ညာကြော်တွေထဲထဲ့ဘို့ တို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ တုန်ယမ်းဟင်းချိုထဲထဲ့တာတုို့ ပုဇွန်ချဉ်လုပ်စားတာတို့ လည်းအဆင်ပြေပါတယ်။
မြန်မာလိုဆီပြန်ဟင်းတော့လုံးဝမချက်စားပါဘူး။ အိုင်အိုရာ့တွက်အလွန်ကိုညှီပါတယ်။ ယူအက်စ်ကိုရောက်ခါစကတော့
ဟား..ပုဇွန်ထုတ်လုပ်ပြီးသားတွေ၊ မိုက်လိုက်တာ။ ချက်စားမယ်။ ချက်စားမယ်ဆုိုပြီး တစ်ထုတ်ကြီးဝယ်ပြီးချက်လိုက်ပါတယ်။ ချက်နေတုန်းထွက်လာတဲ့အနံ့ ကိုတောင်မခံနုိုင်ဘူး။ စားဘုို့ တော့နှစ်ကောင်အပြင်ဆက်ကိုမစားချင်တော့တာနဲ့ နောင်ဘယ်တော့မှ အဲဒီဖရုိုဇန်းတွေကိုချက်မစားတော့ပါဘူး။ ခေါင်းပါတဲ့ကောင်တွေဘဲဝယ်ပြီးချက်စားတာကြိုက်ပါတယ်။
ကြော်ရတာတော့မြန်လည်းမြန်တယ်။ လွယ်လည်းလွယ်ပါတယ်။ ဆားပါးပါးနယ်ထားတဲ့ပုဇွန်တွေကိုခေါက်ထားတဲ့ကြက်ဥနှစ်ထဲနှစ်ပြီးအောက်က ပန်ကိုတံဆိတ်ပေါင်မှုန့် ခြောက်မှုန့် လူးပြီးဆီပူထဲထဲ့ကြော်ရုံပါဘဲ။ ဆူပါ အီးဇီး။ ကြက်ဥထဲမနှစ်ခင်ဂျုံမှုန့် နဲ့ လည်းလူးလေ့ရှိကြပါတယ်။ အိုင်အိုရာ့အတွက်တော့သိပ်မထူးဘူးထင်လို့ 
ပြီးတော့ပုဇွန်ကိုကြက်ဥနှစ်ထဲနှစ်၊ ဒီ Japan made Panko bread crumb ထဲလူးပြီးကြော်ပါတယ်
ခုလို ရွှေညိုရောင်သန်းလာရင်ဆည်ပြီး တစ်ရှူးနဲ့ ဆီစစ်ပြီးစားမဲ့ပန်းကန်ထဲ ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့ ဟုိုအရွက်ဒီအရွက်ထဲ့ပြီးပြင်လုိုက်တာပါဘဲ
ထုံးစံအတုိုင်းကျမအကြိုက် ငရုတ်သီးစိမ်းအနီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နံနံပင်၊ သံပုရာရည်နဲ့ ငါးငံပြာရည်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ချဉ်စပ်လေးနဲ့ တွဲစားပါတယ်။ ချဉ်စပ်ကတော့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အပြင်းအပျော့စပ်နုိုင်ပါတယ်။
ပုဇွန်ကြော်ချည့်စားရမှာထက် ခုလိုမြန်ကောင်းသက်သာ အရွက်စုံတွေကိုသုတ်ထားတာနဲ့ တွဲစားတော့ ပိုပြီးစားချင်စဖွယ်ဖြစ်သလို ကျန်းမာရေးနဲ့ လည်းညီညွတ်တယ်လေ။ တတ်နုိုင်ရင်တော့အမေရိကန်တွေအော်အော်နေတဲ့ ရိန်းဘုိုးကာလာ အရောင်စုံပါနုိုင်သလောက်ပါအောင်တွဲစပ်ထဲ့လိုက်တာပါဘဲ။ အရင်ပို့ စ်တွေမှာတင်ခဲ့သလိုဘဲ အို်င်အိုရာ့ စတိုင်နဲ့ သုတ်ထားတာပါ။ ဘုိုမြန်မာကပြားစတုိုင်ပါဘဲ။ ဆလတ်လုပ်စားတဲ့အရွက်တွေထဲကို စတော်ဘယ်ရီ၊ ကြက်သွန်နီသေးသေးနုပ်နုပ်လှီး၊ နှမ်း၊ ငါးငံပြာရည်၊ ရှောက်ယိုချိုချဉ်အရသာယူပြီး ဆီစိမ်းနဲနဲစမ်းပြီးသုတ်ထားတာပါ။ ဘုိုတွေကရှာလကာရည်နဲ့ သံလွင်ဆီရောပြီး ဆားတုို့ ငရုတ်ကောင်းတို့ ထဲ့ပြီးသူတို့ နည်းတွေအတုိုင်းစပ်ပြီး ဆလတ်ကိုသုတ်သလိုအုိုင်အိုရာကလည်း ကိုယ်နှစ်သက်တာထဲ့ပြီး သုတ်စားထားတာပါ။ မြန်မာပါးစပ်နဲ့ လည်းချိုချိုချဉ်ချဉ်လေးနဲ့ ငံပြာရည်နံ့ ၊ နှမ်းနံ့ ၊ ကြက်သွန်နံ့ လေးနဲ့ ဆုိုတော့စားချင်စိတ်ပိုဖြစ်တာပေါ့နော။
ဒီလိုအရွက်တွေတစ်ဘူးကို ၄ကျပ်လောက်ပေးရတယ်။ အဲဒါတစ်ဘူးဝယ်ထားရင် အသီးအရွက်မချက်နုိုင်လည်းအသားနဲ့ တွဲစားလုိုက်တယ်လေ။ အမျှင်ပါအောင်ပေါ့။
Cheese cake with plum
လာပါပြီ။ ကာလရှည်စွာကြွေးတင်နေတဲ့ အုိုင်အိုရာ့ အကြိုက်ချိစ်ကိတ်လုပ်နည်း။း)
ချိစ်ကိတ်စလုပ်ခါစတုန်းက အင်တာနက်မှာရှာဖတ်တာ ခေါင်းတွေကိုနောက်သွားတာဘဲ။
နယူးယောက်ချိစ်ကိတ်တို့ ချီကာဂုိုချိစ်ကိတ်တို့ ကနံမည်ကြီးတော့အဲဒီနည်းတွေကိုဦးစားပေးပြီးရှာတာလေ။
အဲဒါကိုပဲဆက်လုပ်ဖြစ်သွားတော့တယ်။ ပထမတစ်ခါနှစ်ခါလုပ်ပြီးအချိုးကိုမမှတ်ထားမိလို့ နောက်မှမှတ်ထားပြီးသိမ်းထားလိုက်တာ။ ခုတော့သူများတွေကိုလည်းမျှဝေရင်းကိုယ်လည်းသေချာမှတ်ထားပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီမှာတင်လိုက်တော့လေ။ နော်။
လိုတာတွေကတော့ Cream cheese 1 pack (8 oz), 1 Egg, sugar4table spoons, Milk 1/4 cup, Vanilla2drops, Zest 1 tea spoon, Some crackers crushed, 8"x 1-1/2" round baking tray
a pinch of salt, 375 degree F around 30 minute
ကဲ..စုပြီးရေးလိုက်တယ်။ မှတ်ရ ကူးရလွယ်အောင်လို့ နော်။
ဒီလိုဘူးကြီးနဲ့ ရောဘူးသေးရောရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့်ဘူးသေးနဲ့ လုပ်ပါတယ်။ ဘူးသေးကတစ်ခါလုပ်စာပါ။ ၈ အောင်စပါပါတယ်။ ဘူးကြီးက ဈေးချတာတွေ့ လို့ ချစ်ချစ်ကသူ့ အတွက်ခဏခဏလုပ်ပေးနုိုင်အောင်ဆုိုပြီုးဝယ်လာတာပါ။ ဘူးကြီးဝယ်ရင်လည်းအဲဒီဘူးခွံမှာ အတုိုင်းအတာအမှတ်လေးတွေပါတော့ကြည့်ပြီးလှီးလုိုက်ရုံပါဘဲ။ တခြားတံဆိပ်တွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒါကဈေးပိုသက်သာပါတယ်။ ကောင်းလည်းကောင်းပါတယ်။
အပေါ်ယံပဲခြစ်ရပါမယ်။ အဖြူသားတွေမပါစေရပါဘူး။ ပါရင်ခါးပါမယ်။
ပထမဆုံး ခရင်မ်ချိစ်ကို အခန်းအပူချိန်ရအောင်အပြင်ထုတ်ထားရပါမယ်။ အုိုင်အိုရာကတော့တစ်ခါတစ်ခါ အမြန်လုပ်ချင်ရင် မိုက်ခရုိုဝေ့နဲ့ အပူနဲနဲပေးပြီးလုပ်လုိုက်တာဘဲ။ အဲဒါဆုိုရင်တော့ကြက်ဥတုို့ နွားနုို့ တုို့ ထဲ့ချိန်မှာသိပ်ပူမနေအောင်သတိထားရတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့အခန်းအပူချိန်မှာရှိနေမှလုပ်တာပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ခဲနေရင်လည်းမွှေတဲ့အခါမကြေလို့ စိတ်ညစ်ရပါတယ်။
Oven ကိုလည်း ၃၇၅ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟုိုက် နဲ့ ကြိုဖွင့်ထားရပါမယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ခရက်ကာလေးငါးခြောက်ချပ်ကို ဘလန်ဒါနဲ့ ကြိတ် ဒါမှမဟုတ် ပလတ်စတစ်အိတ်ထဲထဲ့ပြီးကြေအောင်တစ်ခုခုနဲ့ ထု။ တကယ်တော့ဒီအဆင့်ကိုလုပ်သာလုပ်ရတယ်။ အုိုင်အိုရာတုို့ နှစ်ယောက်စလုံးက အဲဒီအခံသားကိုမစားချင်ကြပါဘူး။ ဒီတော့ခပ်ပါးပါးလေးဘဲ ပါလေကာခင်းပါတယ်။ မုန့် ဖုတ်မဲ့ ဘန်းကို ထောပတ်နဲ့ နှံ့ အောင်သုတ်ပြီး အဲဒီအမှုန့် တွေထဲ့ပြီးဇွန်းဖင်နဲ့ ဖိချင်ဖိ၊ အောက်ခံညီတဲ့ ဖန်ခွက်တုို့ ဘာတုို့ နဲ့ ဖိပြီးညှိချင်ညှိပေါ့။ အိုင်အိုရာကတော့ ထောပတ်ကို တစ်ရှုးနဲ့ သုတ်ပါတယ်။ အမှုန့် တွေကို လက်အိတ်စွတ်ပြီးလိုက်ဖိပါတယ်။ ပြီးတော့ ရေခဲသေတ္တာထဲခဏထဲ့ထားပါတယ်။
ခရင်ချိစ်ကိုအရင်မွှေပါတယ်။ အပေါ်ကလို။ ပြီးတော့ ကြက်ဥဖေါက်ထဲ့။ ဆားထဲ့။ သကြားထဲ့။ ဗနီလာနှစ်စက်လောက်ထဲ့။ ရှောက်ခွံ (သံပုရာခွံလည်းရပါတယ်။) ခြစ်ထားတာထဲ့။ မွှေ။ နွားနုို့ ရောထပ်မွှေ။
ပြီးရင်ဘန်းကို မုန့် ဖုတ်ဘန်းကြီးထဲကိုအသာထဲ့။ အပေါ်ကနေ အစောကမွှေထားတဲ့ အရည်တွေလောင်းထဲ့ပြီးရင်အောက်ခံဘန်းကြီးထဲကိုရေနွေး(ရေဆူ)အသာလေးဘေးကနေလောင်းထဲ့ပါတယ်။
ပြီးရင် ကြိုပြီးဖွင့်ထားတဲ့ Oven ထဲမှာအပေါ်ဆင့်မှာထဲ့ဖုတ်ပါတယ်။ နာရီဝက်လောက်ဆုိုကွက်တိလောက်ရပါပြီ။ ကုိုယ့်မီးဖုိုနဲ့ ကိုယ်အတုိုးအလျော့ရှိနုိုင်ပါတယ်။ ရေနွေးခံပြီးဖုတ်တာကတော့မတူးဘဲ စိုစုိုလေးဖြစ်နေအောင်လို့ ပါ။
သေချာအောင်လို့ အလယ်ကိုဒါးနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်သွားကြားထုိုးတံလေးနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်စမ်းကြည့်လို့ အနှစ်တွေကပ်မပါလာဘူးဆုိုရပါပြီ။
ပြီးရင်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာအအေးခံထားပြီးတနာရီလောက်ဆုိုလှီးစားနုိုင်ပါပြီရှင်။ လှီးတဲ့အခါဘန်းနဲ့ ကပ်ရက်အနားသားကိုဒါးပါးလေးနဲ့ အရင်ခွာပေးရပါတယ်။ တချို့ ကမအေးခင်ခွာဘုို့ ညွှန်းတာလည်းတွေ့ ရပါတယ်။ အုိုင်အိုရာ့အတွက်တော့သိပ်မထူးသလိုမို့ အဆင်ပြေသလိုခွာလိုက်တာပါဘဲ။ အေးသွားတော့ ရှစ်စိတ်စိတ်ပြီးပန်းကန်ထဲကုို ဇွန်းပြားနဲ့ ကော်ပြီးထဲ့ပါမယ်။ အပေါ်ယံသားတွေပဲ့တတ်တာတုို့ မလှတာတုို့ ကိုတော့ နှစ်သက်ရာအသီးလေးတွေ ယိုလေးတွေနဲ့ ဖုံးကာပြီးအလှဆင်လိုက်ရင်ဧည့်သည်ကျွေးဘုို့ တင့်တယ်သွားတာပေါ့နော်။
Iora's cheese cake
ချိစ်ကိတ်ထဲမှာနှစ်သက်ရာ လိုက်ဖက်ရာအသီးများလည်းထဲ့နုိုင်ပါတယ်။ အိုင်အိုရာရဲ့ ချစ်ချစ်ကအထဲမှာအသီးတွေပါတာမကြိုက်လို့ ပြီးမှရှိတဲ့အသီးတခုခုနဲ့ တွဲစားပါတယ်။
ဒါက Plum နဲ့ တွဲစားထားတာပါ (Cheese cake with plum)
(Cheese cake with plum)
အင်း..ခုမှဘဲစိတ်ပေါ့သွားတော့တယ်။ မွန်၊မြတ်ကြည်၊ဂျီးဒေါ်၊ မွန်လေး နဲ့ ချိစ်ကိတ်ကိုစောင့်နေတဲ့ဆွေမွန်များနဲ့ လာလည်သူများအတွက်မှတ်မှတ်ရရတင်ဖြစ်အောင်တင်လုိုက်ပါပြီရှင်။
ငါးရံ့ ခြောက်ခွဲနည်း(ကျမနည်း)စောင့်နေသူများအတွက်ပဲကြွေးကျန်ပါတော့တယ်။ တင်ပေးဘုို့ ဓါတ်ပုံရုိုက်ထားပါတယ်။ မတင်ဖြစ်သေးတာပါ။
Posted by Iora at 1:28 AM
Labels: Cheese cake, Desserts, Prawn, Salad, Shrimp
စံပယ်ချို October 15, 2012 at 5:23 AM
ပုဇွန်ကြော်နဲ့အရွက်သုပ်လေးတော့ အရမ်းစားချင်တယ် ကြိုက်လဲကြိုက်တယ်
စာဖတ်သူတွေ စိတ်ချမ်းမြေ့စေတဲ့ အိုင်အိုရာလဲ ချမ်းမြေ့ပါစေလို့
မီးမီးငယ် October 15, 2012 at 5:38 AM
ပြန်လာရင် မအိုင်အိုရာ အတွက်..ဂုံရှမ်းဟင်းတွေ၊
မြတ်နိုးသူ October 15, 2012 at 6:48 AM
Candy October 15, 2012 at 7:03 AM
ပုဇွန်ကို အဲ့လို ကိုယ်တိုင်မကြော်စားကြည့်ဖူးဘူး.. မမပြောသလို ဆိုးအီးဇီးပဲနော် ဟီးးးးး လုပ်ကြည့်ဦးမှ :D ချိစ်ကိတ်ကြိုက်တယ် ကိုယ်တိုင်လုပ်စားဖို့ကျပျင်းတယ် မမလုပ်တာပဲ ကြည့်ပြီးဝါးသွားတယ် :D :D
စူးနှယျလေး October 15, 2012 at 7:55 AM
ပုစွန်ကြော်နဲ့အချဉ်လေး စားချင်တာ... တခါမှ ကိုယ်တိုင် အဲလိုမကြော်ဖူးသေးဘူး...
mon lay October 15, 2012 at 10:57 AM
oh, all of foods are yummy yummy. I like salad and cheese cake.Tomorrow I try to make cheese cake for my son's birthday .Thanks alot for sharing recepies and step by step explain.
Iora October 15, 2012 at 12:54 PM
တကယ် ဆူပါအီးဇီး။ လုပ်ကြည့်ပါဆုို။း)ပုဇွန်တစ်ထုတ်ဒီမှာဆို ရကျပ်၈ကျပ်ကနေ ၁၅ကျပ်လောက်ထိ အရွယ်လိုက်ပြီးရှိတယ်။ တစ်ထုတ်ဆုိုသူငယ်ချင်းတွေအများကြီးစားလုို့ ရတယ်။
နောက်တခါမှတင်ပူရာနဲ့ ကြော်တာတင်ပေးအုန်းမယ်နော်။ အဲဒါကပိုတောင်မြန်သေးတယ်။း)
I am glad that you are making cheese cake for your son's birthday.
Some recipes include sour cream or yogurt or lemon juice or lime juice for the tart taste. For us we'd prefer this taste.
And also it is not so easy to get the appropriate measurement that mentions with British system as I am not familiar with the British system too. I gave up some baking recipe because I needed to convert measurement such as from gram to cup ect. :D
If you wanna make bigger size just multiply the measurement and adjust the time. OK.
BabyAngle October 15, 2012 at 4:07 PM
ပုဇွန်ကြော်လည်းကြိုက်တယ်၊ အရွက်စုံသုပ်လည်းကြိုက်တယ်.. cheese cake လည်းကြိုက်တယ်...
အားလုံးကြိုက်တယ်အမရေ... လုပ်နည်းလေးတွေလည်း မှတ်သွားပါတယ်နော်..
mstint October 15, 2012 at 6:26 PM
စားစရာတွေ စုံလင်နေတာပါလား အိုင်အိုရာရေ။ ပျောက်တော့လည်း ကြာကြီး ကျွေးတော့လည်း များကြီး ကျေးဇူးပါ။
ပုစွန်ကြော်ကြိုက်သလို ကျန်တာတွေလည်း နှစ်သက်တယ် စေတနာလေးကိုလည်း သဘောကျတယ်း)
Thamee Su October 16, 2012 at 12:21 AM
ပုဇွန်ကြော်နဲ့ဟင်းရွက်အစုံသုတ်စားချင်တယ်.......ချိစ်ကိတ်ကတော့ အသဲစွဲပဲ မမအိုင်အိုရာ စုမလုပ်တတ်ဘူး နည်းလေးမှတ်သွားပါတယ်
Iora October 16, 2012 at 8:45 AM
မှတ်သွားလို့ ကျေးဇူးပါ။း)
ညီလင်းသစ် October 16, 2012 at 2:16 PM
ပုဇွန်ကို အဲဒီလို ကြော်ဖို့ စဉ်းစားနေတာ ကြာပြီဗျ၊ အခုအတိုင်းဆို တကယ့်ကို ဆူပါအီးဇီး ပါပဲလား၊ ကျေးဇူးပဲ မအိုင်အိုရာ...၊ ဒါနဲ့ ပုဇွန်ကို ဟင်းချက်ဖို့ ဝယ်ရင် ခေါင်းပါတဲ့ ကောင်တွေပဲ ဝယ်တော့တယ် ဆိုတာဖတ်ပြီး ပြုံးမိသေးတယ်၊ ဟုတ်တယ်နော်..၊ ခေါင်းပါတဲ့ ကောင်တွေပဲ အသုံးတည့်တယ်၊ ခေါင်းမပါတဲ့ ကောင်တွေက ညှီတယ်..၊း)
san htun October 16, 2012 at 8:10 PM
ပုဇွန်ကို အဲလို ကြော်စားဦးမယ်..ဆူပါအီးဇီး..ချိစ်ကိတ်လုပ်စားဦးမယ်..မမအိုင်အိုရာဆီမှာ တွေ့ တယ့် ကိတ်ကို လုပ်ဖြစ်သေးတယ်..တကယ် စားကောင်းတယ်..
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) October 17, 2012 at 2:17 AM
ပုဇွန်ကြော်တွေ အကုန်ကုန်အောင် ဆွဲပစ်ချင်တယ်
ချိစ်ကိတ်ကတော့ သွားရည်တွေ အတောင့်လိုက်ကျအောင် ငမ်းသွားတယ်..
စကားမစပ် အောက်ဆုံးက ပန်းအိုလေး လှလိုက်တာ
Iora October 17, 2012 at 6:04 AM
တင်ပူရာနဲ့ ရုိုးရုိုးပဲကြော်ရင်လည်းဂျပန်ဆုိုင်တွေကလိုမျိုးရပါတယ်။ သူတို့ ကျတော့တင်ပူရာဖျော်ရင်ချောမွတ်နေအောင်မဖျော်ဘူး။ Lumpy ဖြစ်နေအောင်လေးဘဲဖျော်တယ်။
း)) ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ခေါင်းပါတဲ့ကောင်တွေဘဲအသုံးတဲ့တယ်။း))
ကြော်စားစန်းထွန်းရေ။ လွယ်တယ်။ စားကောင်းတယ်။
ချိစ်ကိတ်လည်းလုပ်စားဖြစ်အောင်လုပ်စားသိလား။ ကုိုယ့်ဟာကိုယ်လုပ်စားပြီးအမြဲကျေနပ်တာကကောင်းပြီးအလွယ်တကူသက်သက်သာသာစားရလို့ လေ။
blackroze October 17, 2012 at 11:37 AM
မကြီးလည်းကိတ်မုန့် တုို့ ဘာတို့ ကုိုလွယ်တာလေးတွေဘဲလုပ်တာပါ။ (ပစ်ပစ်ကမကြီးဆုိုတော့မကြီးလိုက်တာ။ တကယ်တော့ပစ်ပစ်လေးကမကြီးတူမအရွယ်လေးဘဲဖြစ်မယ်။)
အမြီးလေးကကိုင်ပြီးဆီအုိုးထဲထဲ့။ လက်လည်းဆီပူထဲမရောက်သွားစေနဲ့ အုန်းခလေးရေ။
Anonymous October 18, 2012 at 2:10 AM
မ ရဲ့ ဘလော့လေးကို အလည်ရောက်တာကြာပါပြီ
အသံတိတ်လေး ဆိုပါတော့ ခုမှ ကွန်မန့် ရေးဖြစ်တာပါ
ချိစ်ကိတ်ကတော့ မလုပ်တတ်ဘူး နည်းလေးမှတ်သွားပါတယ်
Chaw Su October 19, 2012 at 3:23 AM
အိုင်အိုရာ ရေ- ပုဇွန်ကြော်လည်းစားသွားတယ်.... ချိစ်ကိတ်ကိုတော့ ကော်ဖီလေးနဲ. သောက်ရအောင် ပါဆယ်ထုတ်သွားပြီနော်....း)
Iora October 19, 2012 at 11:23 AM
လာလည်တဲ့အတွက်ရောကွန်မန့် လေးချန်ခဲ့တဲ့အတွက်ရောကျေးဇူးတင်ဝမ်းသာပါတယ်။း)
မိုးငွေ့........ October 19, 2012 at 10:50 PM
Anonymous October 21, 2012 at 4:24 PM
သဉ္ဇာ - Thinzar October 23, 2012 at 1:46 AM
လေပြေချို November 2, 2012 at 8:45 AM
ချိစ်ကိတ်လုပ်နည်းလေးကို အသေအချာပဲ မှတ်သားသွားတယ်.. အရမ်းကြိုက်လို့လေ... တစ်ခါမှတော့ အဲ့လိုမျိုးမလုပ်စားဖူးဘူး.. လေပြေကအသီးအနှံကြိုက်တယ်ဆိုတော့ စပျစ်သီးတို့ ပဲစိမ်းသီးတို့ သီဟိုဠ်စံတွေပါထည့်ရင် ပိုစားကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်..အိမ်မှာစမ်းသပ်ကြည့်အုံးမယ်
Anonymous November 3, 2012 at 10:53 AM
အများအားဖြင့်တော့ ဘယ်ရီသီးမျိုးစုံ ထဲ့တာမြင်ဘူးပါတယ်။ တခါတလေဒီလိုဘဲကုိုယ်စားချင်တာတွေထဲ့ရင်းနည်းသစ်နဲ့ ကြော်ကြားသွားတာတွေအများကြီးဆိုတော့ အနဲစာလေးမှာဘာစမ်းစမ်း စမ်းကြည့်တာကောင်းပါတယ်။ တခါကစပျစ်သီးခြောက်ထဲ့ကြည့်ဘူးတယ်။ အရမ်းချိုသွားတယ်အသီးကအချိုကြောင့်။
ပဲစိမ်းသီးတုို့ သီဟုိုဠ်စေ့တို့ လည်းနဲနဲလေးထဲ့ပြီးအရင်စမ်းကြည့်ပြီးကြိုက်တော့မှလုပ်တာကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။
အပြုံးပန်း November 9, 2012 at 2:08 AM
ပုဇွန်ကြော်ကို တော်တော် သဘောကျသွားပြီ
အရွက်သုပ်နဲ့ ပုဇွန်ကြော်ကို နေ့လည်နေ့ခင်း အလည်လာမယ့်သူတွေကို လုပ်ကျွေးဖို့ အကြံရသွားတယ်။
ချိစ်ကိတ်လုပ်နည်းလေးလဲ မှတ်ထားလိုက်တယ် မလုပ်နိုင်သေးလို့ပါ
ko December 19, 2012 at 1:11 PM
ပုံတွေကြည့်ပြီး တော်တော်သရေ ကျသွားတယ်ဗျာ...အရွက်စုံသုပ်ကို လုပ်စားကြည့်အုံးမယ်...ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်စားရတာကြိုက်တော့ အဲ့လို လုပ်စားကြည့်မယ်ဗျာ
Iora January 5, 2013 at 8:01 PM
အဲလိုလုပ်စားတာမြန်မာလျာနဲ့ ပိုတွေ့ တယ်လို့ ကျမတော့ထင်တာဘဲ။
Iora January 5, 2013 at 8:04 PM
ကုိုယ်လည်းချိစ်ကိတ်မလုပ်ဖြစ်တာကြာပြီမအားလို့ ။း)
ညစာထမင်းလွတ်မုန့် ဟင်းခါး၊ ဘူးသီးကြော်၊ ကန်ဇွန်းရွက်ကြော်
ပုဇွန်ကြော်၊အရွက်သုတ် နဲ့ ချိစ်ကိတ်လာစားလှည့်နော...
Las Vegas လောင်းကစားမြို့တော်ခရီး
Burmese breakfast and others (6)
Collard Green (1)
Dried Shrimp (3)
fish paste (3)
Green Mustard (1)
Mackrel fish (1)
pea nut (1)
Pickled food (4)
Preserved Lime (1)
Rice Stick (2)
Roselle Leave (1)
Salty fish (2)
Spicy curry (3)
spicy paste (8)
Copy right Iora. Awesome Inc. theme. Theme images by borchee. Powered by Blogger.